Amarka Amaan Helida (OFP) ee dhanka ka ah Dagaalka Qoyska Dhexdiisa ah – Adigu iskaa u sameyso | LawHelp Minnesota
Haddii aad khatar ku jirto, WAC CALL 911
Akhbaartani waxa ay kaa caawin kartaa hawsha maxkamada Amarka Amaan Helida (OFP). Amarku kaama uu ilaalin karo qof khatar ah. Haddii aad is leedahay hadda khatar ayaad ku jirtaa, wac 911.
Ka Fakar Inaad Qareen Hesho
Si weyn uga fakar inaad qareen hesho haddii kiiskaaga ay ku jiraan:
walwal ku saabsan martabadaada sharciga wadanka aad ku joogto (immigration)
amrida qof makhraati ahi inuu maxkamada yimaado
daliil qoraal ah
makhraati furka khibradlayaasha sida dhaqaatiirta ama bilayska
hadii qofka kugu tacadiyeyaa uu qareen leeyahay, waa inaad isku daydaa in aad adiguna mid soo hesho. Hel qareen bilaash ugu shaqeeya dadka danyarta ah (Find a free lawyer for low-income individuals) ama hel qareen jeebkaaga ah (private lawyer).
La soo Bax (Download) Foomamka
Kala soo bixida (Download) foomamka banaan shabakada (website) Maxkamada Minnesota. La soo bax (download) foom walba adigoo riixaya “PDF” ama “DOC” ku hoos taal foomka.
Haddii aad doonayso inaad daabacato foomka aadna gacanta ku buuxiso, riix “PDF”
Haddii aad doonayso inaad jawaabahaaga geliso ka dibna aad daabacato foomka buuxsan, riix “DOC”
Ka hor inta aadan bilaabin buuxinta foomamka, akhri tilmaamaha qaybaha falaaraha hoos u jeeda ee hoose ee la yiraa ”Ku saabsan Amarka Amaan Helida” iyo “Waxa aad u baahan tahay inta aadan bilaabin.” Ka eeg Warqadayada xogta aruursan ee Amarada Amaan Helida iyo Amarada Ka Reebida Khashkhashaadaha (Orders for Protection and Harassment Restraining Orders) wixii kale ee akhbaar ah.
Haddii adiga ama ilmahaagu aad u baahan tihiin amaan helid, buuxi foomamkan “Dalbashada Amarka Amaan Helida ah” hadda:
Falaarta hoos geey ka dibna hel mid walba oo ka mid ah foomamkaa:
OFP101 - Tilmaamaha Dalabka Ammarka Badbaadinta
OFP102 - Dacwada Amarka Difaacidda ah (OFP)
OFP103 - Ogeysiiska la Siiyo Codsadaha Kuna Saabsan Macluumaadka Lagu Bixiyay Cosdsiga iyo Warqadda Dhaarta (Affidavit)
OFP106 - MUHIIM OGEYSIISKA CODSADAHA
OFP107 - Codsiga Cinwaanka/Telefoonka Qarsoodiga
OFP904 - Carruuta Yaryar ee Kale ee la nool Dacweysanaha
Haddii laguu “keeno” warqado maxkamadeed oo ku saaban qof kaa codsanaya Amaan Helid, buuxi foomamka “Ka Jawaabida Amarka Amaan Helida” markiiba:
OFP201 - Macluumaadka Dacweysanaha Kiis ah Tacaddiyada Qoyska Gudihiisa
OFP202 - Codsiga Dacwad-dhageysi
Ka Hadlaya Amarada Amaan Helida
Muxuu qabtaa Amarka Amaan Helidu?
Amarka Amaan Helidu (OFP) waa amar maxkamadeed. Waxa uu amraa tacadiyahu inuusan adiga wax ku yeelin. Wuxuu kaloo amraa waxyaabo kale sida:
inuu gurigaaga ka saaro tacadiyaha uusana kula soo xiriirin
haysashada ilmaha oo ku meel gaar ah
waqtiga waalidka ama booqashooyinka
masaariifta ilmaha ama masaariifta xilaha
inuu tacadiyahu uu kuu ogolaado inaad isticmaalo hanti sida gaari aad wada leedihiin.
Waxaad kale oo aad codsan kartaa ilaalino kale.
Xaq ma u leeyahay Amarka Amaan Helida (OFP)?
Si aad u hesho amarka (OFP), waa khasab inaad ugu yaraan 16 sanno jir tahay, aadna cadeyso in dhibaato kugu soo gaartay dagaal qoyska dhexdiisa ah. "Dagaalka Qoyska Dhexdiisa ah" macnahiisu waa in uu kugu tacadiyey:
qof qoyskaaga ka mid ah
xilo (ama xilo-hore)
qof ilmo idinka dhaxeeyaan
wiil /gabar aad is shukaansataan
qof adiga kula nool ama horey kuula noolaan jiray
cid walba oo aad xiriir galmo ama mid shukaansi oo weyn aad horey ula lahaan jirtay
Haddii ay ciddi kugu tacadiday, laakiin aysan ka mid ahayn dadkaas kor ku xusan, waxaa dhici karta inaad awoodo inaad hesho amarka khakhashaad ka reebida ("Harassment Restraining Order") kolkaa.
Waa maxay waxyaabaha lagu xisaabiyo tacadiga?
Sharciyan, waa lagugu tacadieyey haddii qof:
uu jir ahaan wax ku yeelay adiga
uu isku dayey inuu wax ku yeelo
aad ka qabto cabsi ah inuu wax ku yeeli doono
uu kugu khasbay inaad falal galmo ah aad sameyso adigoon doonayn
uu adiga kuu geystay hanjabaadyo argagax leh
uu kaa hor istaagay inaad wacato 911 sabab kastaba ha noqto wiciduye
Ma u heli karaa Amarka Amaan Helida (OFP) ilmo?
Haa, haddii aad tahay waalidka ama qofka ka mas’uulka ah ama qof kale oo ehel u ah ilmaha. Marmarka qaarkood, maxkamadu waxa ay u ogolaataa qof kale oo ka weyn 25-sanno jir inuu u qaadi karo Amarka Amaan Helida ilmaha. Haddii aad doonayso inaad u dalabto ilmo lagu tacadiyey, waxa ay u badan tahay inaad u baahan doonto qareen.
Wixii akhbaar ah ee kale:
Ka akhri Buuga yar ee Amarada Amaan Helida iyo Khashkhashaada ka Reebida (Orders for Protection and Harassment Restraining Orders Booklet).
Akhri Warqada Xogta Aruursan ee Amarada Ilaalinta iyo Khashkhashaad ka Reebida (Orders for Protection and Harassment Orders Fact Sheet).
Waxa aad u Baahan tahay ka hor inta Aadan Bilaabin Hawsha
Waxa aad u baahan tahay akhbaar cayiman si aad u buuxiso foomamka Amarka Ilaalinta ah. Haddii aadan aqoon dhamaan jawaabaha oo dhan, dhib ma leh. Waa aad dhaafi kartaa su’aalaha qaarkood iyagoo banaan waana aad heli kartaa Amarka (OFP) ah. Mar walba oo aad akhbaar siyaado bixiso waa mar walba oo fursadahaaga siinta amarku ay sii fiicnaadaan.
Akhbaarta Aasaasiga ah ee ku saabsan Dhamaan Qolyaha oo dhan.
Waxa aad u baahan tahay akhbaar aasaasi ah oo adiga naftaada, tacadiyaha iyo wixii ilmo ah ee dacwada ku jira ku saabsan. Akhbaarta aasaasiga ah waxaa ku jira magacyada, taariikhaha, waqtiga dhalashada iyo ciwaanada. Haddii aadan ka hayn akhbaar sugan tacadiyaha bixi waxa ugu badan ee akhbaar ah ee aad ka og tahay tacadiyaha.
Dacwadaha Maxkamada Qoyska ee Hore
Haddii ay jireen dacwadooyin hore oo ka furnaa maxkamadaha qoyska oo ku saabsan tacadiyaha waxa aad u baahan tahay inaad sheegto goobta dacwada (degmaddee) iyo kolka kiisku dhacay.
Akhbaarta Dhaqaalaha Haddii aad Doonayso Masaariif Ilmood ama mid Xilood
Haddii aad doonayso masaariif ilmood ama mid xilood, waxa aad u baahan tahay inaad sheegto inta ay le’eg tahay lacagta ku soo gashaa, inta ay tahay lacagta soo gasha tacadiyaha iyo waxa uu kharashkaagu yahay. Kharashaadka waxaa ku jiri kara kharashka cuntada, kirada, ama amaahda guriga (mortgage), iyo khasiraadyada korontada.
Waxa aad ka codsan kartaa maxkamada inay amarto in tacadiyahu uu dib u bixiyo khasaaraha u dhacay tacadig awgii. Arrintan waxaa loogu yeeraa qaamaha. Khasaaraha waxaa ku jira hanti wax la yeelay ama kharashaad caafimaad. Waxa aad u baahan tahay inaad u sheegto maxkamada inta uu kharaasahu le’ekaa. Waa ay ku caawin haddii aad haysato nuqulo ku saabsan khasiraadyada iyo akhbaar kale oo cadeynaya inta ay le’ekayd lacagta kaa baxday.
Ma u baahnahay dacwo garnaqsi ah?
Marmarka qaatkood waxyaabaha aad codsato si ay u caawiyaan amaankaaga waxaa khasab inuu ku go’aansado maxkamad garnaqsi ah xaakim. Waxyaabo kale oo aad codsataa waxaa dhici karta inaysan taa u baahan. Ka Akhri bogagga 4 ilaa iyo 7 Tilmaamaha Maxkamada wixii kale ee akhbaar ah ee ku saabsan kolka aad u baahan tahay dhagaysiga dacwo garnaqsi ah.